महोत्तरीमा गो’ली चल्यो, एकजना घाइते, काे हुन उनी ? — Sanchar Kendra
महोत्तरीमा गो’ली चल्यो, एकजना घाइते, काे हुन उनी ?
जनकपुरधाम । अज्ञात समूहले चलाएको गो’ली लागेर महोत्तरीमा एक जना घाइते भएका छन् ।
जिल्लाको औरही नगरपालिका वडा नम्बर ६ बैरियामा अज्ञात समूहले प्र’हार गरेको गो’लीबाट बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर १ का ३० वर्षीय रोशन कोइराला घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिनेश आचार्यका अनुसार कोइरालामाथि दुई गो’ली प्र’हार गरिएको छ । एउटा गो’ली उनको हातमा र अर्काे कोखामा लागेको आचार्यले बताए । गो’ली प्र’हारबाट घाइते भएका कोइरालालाई उपचारका लागि बर्दिवासस्थित जनसेवा अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ ।
कोइराला औरहीतर्फ गएको बेलामा बुधबार राति करिब ७ः३० बजेतिर उनीमाथि गो’ली प्रहार भएको एसपी आचार्यले बताए । उनका अनुसार घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
कोरोनाविरूद्धको चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज आजदेखि, कहाँ गएर लगाउने ? खोप केन्द्रकाे सूचीसहित